Askari Somali-American ah oo Toogasho ku Dilay Gabar Cadaan ah (VIDEO) | Arrimaha Bulshada
Home News Askari Somali-American ah oo Toogasho ku Dilay Gabar Cadaan ah (VIDEO)
Askari Somali-American ah oo Toogasho ku Dilay Gabar Cadaan ah (VIDEO)
Thursday, July 20, 2017 News Edit
Bulsha:- Booliiska magaalada Minneapolis ayaa baaritaano dheeraad ah ku wada qaabka uu u dhacay dil askari Soomaali-American ah oo katirsanaa ciidanka booliiska ee magaaladaasi Minneapolis kaasi oo toogtay haweeneyda u dhalatay dalka Australia.
Ninkan oo lagu maga caabo Maxamed Nuur oo katirsanaa booliiska magaalada Minneapolis ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay dil loo geestay Haweeney u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justine Damond, waxaana wali la baarayaa qaabka uu u dhacay dilkan.
Haweenayda uu dilay askarigan Soomaali-Mareykankanka ah ayaa wacday lambarka 911 si ay booliiska ugu wargaliso dhaq dhaqaaq iyo cod ka soo yeeray gurigeeda agtiisa, waxaana booliiska markii uu gaaray gurigeeda dhacday in haweeneydaasi halkaasi lagu toogto.
Askarigan Soomaaliga ah ee dilka geestay ayaa si KMG ah shaqada looga fariisiyay, Waaxda badbaada Shacabka ayaa sheegtay in ay baaritaan ku hayso arrinta Sabtidii dhacday, laakiin waxay intaas ku dareen in aysan daarnayn kaameerada askariga ku xirnayd markii ay arrintaasi dhacaysay.
Duqa magaalada Minneapolis, Betsy Hodges oo war kooban kasoo saartay dilkan ayaa sheegtay in ay aad uga naxday kana qalbi jabtay falkan dilka ah ee magaaladeeda ka dhacay.